प्रदुषण डायरी, सेतो टिसर्ट…….. - साक्षी खबर प्रदुषण डायरी, सेतो टिसर्ट…….. - साक्षी खबर
चैत्र १५, २०७७ | ६५३ पटक पढिएको
काठमाण्डौको भैसेपाटिमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड भन्दा दशगुणा बढि हावा प्रदुषण भैरहेको समाचारसंगै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाइ सेवा बन्द भैरहंदा म गुर्जेखोलाको पुल छेउमा सेतो कटनको टिसर्ट र सेतै पाइन्टमा मोटरसाइकल यात्रामा थिएं ।
केन्द्रका सवै सन्चार माध्यमले काठमाण्डौमा वायु प्रदुषण अत्यधिक भएर राजधानी अध्यारो भएको समाचारलाइ प्रमुख बनाइरहेको खवर घोराहीको अफिस पुग्दा थाहा भयो । राजधानीमा हरेक दिन प्रदुषणको मापन गरिन्छ, तर मोफसलमा भने कतै यो अभ्यास छैन ।
’नाप्ने भएपो थाहा हुन्थ्यो, यहांको प्रदुषणको चिन्ता सरकारलाइ कसरी होस’, मलाइ लिफ्ट दिने पत्रकार राकेश बस्नेतले भनिरहेका थिए । त्यस्तै छन् स्थानिय सरकार । प्रदुषणका वारेमा यहांका सरकारलाइ कुनै प्रवाह छैन । तीन बर्षमा निर्माण सक्ने भनिएका पुल ५ बर्षसम्म निर्माणाधिन हुन्छन् । घना बस्तीकैवीचमा भारी उत्पादन क्षमताका सिमेन्ट उद्योगहरुले रात्रिकालिन समयमा धुलो व्लास्ट गरीरहेका छन् । पुराना चिम्निका इटाभट्टाहरुबाट निस्केको धुवाको मुस्लोले आकाश ढाकिरहेको हुन्छ । चारलेनका नाममा निर्माण सुरु भएको सडकले विगत एक बर्षदेखि हाइवेलाइ धुलाम्मे बनाइरहेको बनाइरहेको छ । नागरीक आवाज सुन्न सरकार तयार छैन ।
तुलसीपुरबाट मसंगै यात्रा गरेको त्यो मैले लगाएको सेतो टिसर्ट…., सांझ घर पुग्दा क्रिम कलरमा परीणत भैसकेको थियो, अर्थात धुलोको रंग पनि क्रिम कलरको जस्तै थियो । साझ हातमुख धुंदा नाक सिं… गर्दा कालो सिंगानमा धुलाका डल्ला निस्कन थाले,, मैले टुलुटुलु हेरीरहें ।
तीन दिन भो, मैले निलो आकाश देखेको छैन, राप्ती ववई क्वाम्पसका एक जना प्राध्यापकलाइ सोधें, वादलले आकाश निलो देखिएको होइननी, यो पनि वायु प्रदुषणले हो, ती प्राध्यापकले जवाफिए ।
तुलसीपुर—घोराही—लमही राजमार्ग छिचोल्दा तुलसीपुरमा मोतिपुर सडक खण्डको धुलोले स्वागत गर्दछ, सक्राम खोलापुलले धुलोको स्वागतलाइ भव्य बनाउंछ, अनि दुधरास सिमेन्ट कारखानाबाट निस्केको धुलोको मनमोहक दृश्यले धुले पर्यटनको झल्को दिन्छ ।
सोनापुर सिमेन्टका सिइओ हरी पाठकले अनुगमनका क्रममा भनेका थिए, हामीले त जर्मन प्रविधिलाइ प्रयोगगरी लेदर ज्याकेटबाट फ्याक्ट्रिबाट निस्कने धुलोलाइ डिस्पोज गर्दै आएका छौं, यो प्रविधि हेर्नोस न!’….। तर धुलो छिप्ने होइन, दिदिका घरको काउली खांदा दांतमै क¥याङकुुरुङ हुन्छन्, गोग्लीमा अर्कि दिदिको घर छ, त्यहां वारीमा लगाएका डालेघास समेत पशुले मनपराएर खान छाडिसकेका छन् रे । खैरा नारायणपुरमा कल्भर्ट वाइपास गराउन चारलेनले पक्कि सडक भत्काएको छ । धुलैधुलोले सडक छिचोल्नै मस्कील । त्यसपछि गुर्जेखोला पुल आसपासमा झनै वेहाल ।
यहांको हावामा कति प्रतिसत धुलोका कणहरु छन्, कति मानव शरीरलाइ हानीगर्ने कार्वनडाइ अक्साइड र कार्वन मोनो अक्साइडको मात्रा ? वातावरण मन्त्रालयको वेवसाइटमा पनि हेरें, यहांको हवामा घुलित प्रदुषणको मात्रा ३६ दशमलव ७ पर माइक्रो ग्राम थियो, संगैको अझै विकशित शहर नेपालगन्जको भने ३३ दशमलव ९ पर माइक्रोग्राम थियो, प्रमाणित भयोकि नेपालगन्ज भन्दा दाङ प्रदुशित शहर जुन नेपालको मापदण्डमा पनि छैन भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डमा कसरी पुग्ला ?
’यो ठेकेदारले चलाएका देश हो, ठेकेदारलाइ सरकारले कारवाहि गर्नै सक्दैन, त्यसैले त हाम्रो यो हविगत भएको’ घोराहीको तुलसीपुर चौकमा भेटिएका स्थानियबासी दामोदर पौडेलले भने, त्यसैले त तुलसीपुर चौकले यहां आउने पर्यटकहरुलाइ बर्षौदेखि धुलोले स्वागत गरीरहेको छ ।
घोराहीको मुटु…., विचरा तुलसीपुर चौक । दक्षिणपट्टि जवर्जस्त स्थानियबासीको प्रेसरमा एक लेन कालोपत्रे भएपनि उत्तरपट्टिको सडक धुलाम्मे र हिलाम्मेको नियती भोगीरहेको छ । यसले समग्र दाङलाइ धुलोको शहर भनेर परीचित गराएको छ ।
हो दाङ अहिले धुलो र धुवाको शहर बनेको छ । करीव ५० बढि इटा भट्ट, त्यत्तिकै मात्रामा हाइवेसंगै जोडिएका क्रशर उद्योगहरु, घना बस्तीवीचमा रहेका चारवटा सिमेन्ट उद्योगहरु तथा ग्रामिण बस्तीमा डोजरले वन भत्काएर खनेका सडकहरु धुलोका कम्पनीहरु हुन् । यी कम्पनीहरुलेनै दाङ चलाएका छन्, किनकि यहां प्रदुषण मापन संयन्त्र छैन ।
मेरो सेता टिसर्ट, निर्जिव छ र प्रतिकार गर्न सकिरहेको छैन, जति धुलो आएपनि सहज रुपमा ग्रहण गर्दछ । दिनदिनै मैलो हुंदा धोइरहनुपर्ने ?, मैले सोंचे मेरो टिसर्टको आयु घटेको होला…..। थाहा छैन, टिसटसंगै मेरो आयु पनि धुलोले कति घटाउने हो ।
हवामा कति प्रदुषण छ?, मैले घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीलाइ सोधें ।
मेसिन रामपुरमा राखिएको छ, त्यसलाइ हामीले अपडेट गर्न मिल्ने अवस्था छैन, वातावरण मन्त्रालयलेनै मोनिटरीङ गरीरहेको छ , वेवसाइटमा हेरेपछि जानकारी हुन्छ ’ नगरप्रमुखले सजिलो जवाफ दिए । तुलसीपुरका मेयर घनश्याम पाण्डे त वन तथा वातावरण क्षेत्रमा धेरै गहिरो अध्ययन गरेका व्यक्तित्व हुन्, तर तुलसीपुरमा प्रदुषण मापनको कुनै संयन्त्र छैन ।
यहांको हवामा कति प्रतिसत धुलोका कणहरु छन्, कति मानव शरीरलाइ हानीगर्ने कार्वनडाइ अक्साइड र कार्वन मोनो अक्साइडको मात्रा? वातावरण मन्त्रालयको वेवसाइटमा पनि हेरें, यहांको हवामा घुलित प्रदुषणको मात्रा ३६ दशमलव ७ पर माइक्रो ग्राम थियो, संगैको अझै विकशित शहर नेपालगन्जको भने ३३ दशमलव ९ पर माइक्रोग्राम थियो, प्रमाढिात भयोकि नेपालगन्ज भन्दा दाङ प्रदुशित शहर जुन नेपालको मापदण्डमा पनि छैन भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डमा कसरी पुग्ला? अर्थात मोफसलको प्रदुषण सार्वजनिक गर्ने सवालमा स्थानिय सरकारहरु वेखवर छन्, मेरो टिसर्ट जस्तै ।
सांझ घर पुग्दा मेरो टिसर्टको प्रदुषण सावुन पानीले नापेको थियो……। तर यहांका नागरीकको शरीरभित्र प्रवेश गरेको प्रदुषण कस्ले नाप्ने?
सडक इन्जिनियरको सर्वेमा हुंदैन, डोजर डाइभरको सर्वेका आधारमा निर्माण भैरहेका छन् । स्तरोन्नतीलाइ प्रार्थमिकतामै राखिन्न, तर यत्रतत्र वन क्षेत्रमा सडकका ट्र¥याकहरु खुलिरहेका छन् । यसले धुलाम्मे स्वागतलाइ गाउंसम्मै पु¥याएको छ । जता ठुला रुखहरु छन्, त्यतैतिर तन्किरहेका छन्, ग्रामिण बस्ती छिचोल्ने सडकहरु । कति स्लोपको उकाला े? इन्जिनियरको आवस्यकता छैन, स्थानिय पालिकालाइ, डोजर चालकले निर्धारण गरीदिन्छन्, सडकको स्लोप…।
हो, मेरो टिसर्ट जस्तै छन्, आम नागरिकहरु,
सरकारले गरेका कामको खवरदारी छैन, आवाज उठाएपनि अनर्थ बनाइदिन्छन्, उच्च अहोदाका मन्त्री कर्मचारीले । त्यसैले त टिसट जस्तै निरिह नागरीकहरु । जव वोली र विरोधको कदरनै हुंदैन भने…..। जसरी निर्जिव टिसर्टले प्रतिकारै नगरी आफ्नो आयु घटाइरहेको छ, त्यसरीनै यहांका नागरीकहरुले पनि प्रतिकार गर्न सकिरहेका छैनन् । मानौं यो सरकारी सवैयाका कारण नागरीकहरुपनि टिसर्टजस्तै निर्जिव हुन विवश छन् । अ त्यो नागरीक म पनि त हुं नी….। सायद मेरो पनि औषत आयु दिनदिनैको धुलो धुवाले खटाइरहेको छ ।
काठमाण्डौमा प्रदुषणको मात्रा एक्कासी बढ्दा वनमा लागेको डढेलोको कारण भनियो । चिकित्सकहरुले यस्तै प्रदुषण कायम रहेमा मानिसहरुमा हृदयघात, पक्षघात, दम तथा क्यान्सर जस्ता घातक रोगहरुको संक्रमण देखिन सक्ने चेतावनी दिए । काठमाण्डौको प्रदुषण कम हुन यात भारी बर्षात हुनुपर्ने छ, यात, तिव्र गतिको हवा चल्नुपर्ने छ । तर त्यो कचौरा आकारको उपत्यकामा तिब्र वेगको हवा चल्ने सम्भावना न्युन छ रे …..।
यहांको प्रदुषण कसरी हट्ने हो? थाहा छैन, नागरीकलाइ, वेखवर छन् स्थानिय सरकार । ठेकेदारले चलाएको देशमा मेरो टिसर्ट जस्तै निरिह छन् नागरीकहरु । त्यसैले त घोराहीको मुटुमा दशकदेखि हिलो र धुलोले यहां आउने पाहुनाहरुलाइ स्वागत गरीरहेको छ ।